Global Voices teny Malagasy » Mamelively mpianatra lisea iray mitsikera ny governemanta ny fampitam-baovao mpanohana ny fanjakana Hongroà · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Avrily 2019 5:34 GMT 1	 · Mpanoratra Atlatszo.hu Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Hongria, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Zon'olombelona
Blanka Nagy mikabary nandritra ny fihaonana iray tamin'ny Janoary 2019. Saripikan'i Márk Tremmel, CC BY-NC-SA 2.5.
Tantara nosoratan'i Tamás B. Kovács sy nadikan'i Anita Kőműves [ho amin'ny teny anglisy] ho an'ny fanaovan-gazety fanadihadiana tsy mpitady tombom-barotra, Atlatszo . Nivoaka teto ny endrika nasiam-panitsiana noho ny fifanaraham-piasana miaraka amin'i Global Voices.
Namelively indray an'i Blanka Nagy, mpianatry ny lisea izay nanohitra ny governemanta tamin'ireo fihetsiketseham-panoherana maro hatramin'ny faramparan'ny taona 2018 ireo seha-baovao pro-governemanta hongroà.
Niaritra fanaratsiana amin'ny fahaizany sy iharan'ny fanohintohinana ara-nofo mihitsy aza i Nagy, tamin'ny niantsoan'ny sehatra iray azy ho “makorelina”.
Efa nametraka fitoriana izy ary nandresy tamin'ireo raharaham-panaratsiana avy seha-baovao mpanohana ny fitondrana miisa telo milaza fa tsy mahay izy any an-tsekoly. Ireto avy ireo sehatra telo ireo: Lokál, Ripost, and Origo. Na izany aza, rehefa nandresy an'i Origo i Nady tamin'ny raharaham-pitsarana iray, dia nanao famelezana iray hafa ity seha-baovao ity, namoaka ny taratasi-naotiny any am-pianarana. Nolazain'i Nagy tamin'i Atlatszo fa efa mihevitra ny hitory indray an'i Origo izy noho ireo tantara farany indrindra ireo.
Lasa nalaza i Blanka Nagy tao Hongria, tamin'ny ririnina faran'ny taona 2018- voalohan'ny taona 2019 lasa teo raha nikabary tao amin'ny fivoriana iray fanoherana ny governemanta izy, ka nandritra izany no nitsikerany ireo politisiana malaza noho ny teny tsy maotona fampiasan'izy ireo. Nisy akony tany amin'ireo mpisera media sosialy maro ny teny mahery nataony ary nalaza haingana ny lahatsary  iray nahitana azy nikabary.
Tokony ho roa volana taorian'ny nampalaza ny lahatsary nahitana azy tao amin'ny media sosialy, nanomboka nanao andiam-panafihana ireo fampitam-baovao pro-governemanta sy ireo mpaneho hevitra amin'ny haino aman-jery toa an'i Zsolt Bayer. Nolazain'ireo sehatra pro-governemanta ireo fa tsy mahay na inona na inona ilay zazavavy amin'ny taranja maro ao an-tsekoly, ary tsy hita nianatra nandritra ny andro maromaro. Nolazain'ireo ihany koa fa “mpianatra ho mpiantsehatra tsy manan-talenta” sy “makorelina” ihany koa ilay zazavavy.
Nampitain'ny mpisolovavany tany amin'ny fitsarana ny kopian'ny naotiny ho porofo fa tsy ningitrika izy – ary tamin'izay no nahazoan'ny mpisolovavan'i Origo ny naotiny any an-tsekoly. Nanapa-kevitra ilay seha-baovao ny hamoaka ny lahatahirin'ny naotiny, milaza fa saiky tsy afaka izy tamin'ny taranja tantara tamin'ny telovolana farany ary mananontanona ihany koa ny tsy-fahombiazana teo amin'ny taranja hafa.
When #Hungary ‘s pro-govt media lied about teenage protester Blanka Nagy, she sued for defamation and won. Ordered to issue corrections, however, they've refused and doubled down. TV2 devoted a whole news segment to mocking her grades, mentioning court documents but not its ruling https://t.co/MyllWb2Jwh 
Rehefa nandainga ny fampitam-baovao mpanohana ny governemanta hongroà momba an'i Blanka Nagy, tanora mpanohitra. Notoriany ho nanao faniratsirana ka dia resiny teny amin'ny fitsarana. Raha nodidiana hamoaka fanitsiana, dia tsy nanaiky fa mbola nikiribiby ihany. Nanokana ampahany manontolo hanesoesoana ny naotiny ny TV2, namoaka ny taratasy nandritra ny fihainoana fa tsy ny didim-pitsarana.
“Efa eo am-piheverana ny hitory ilay seha-baovao namoaka ny naotiko izaho sy ny mpisolovavako”, hoy i Nagy tamin'i Atlatszo nandritra ny antsafa iray. Nolazainy fa tsy manan-jò hamoaka ny naotiny ny Origo. Heveriny sy ny mpisolovavany aza fa tsy manan-jò hijery izany naotiny izany ilay seha-baovao rehefa narotsaha ho dosie izany.
“Sady tsy marina ihany koa izay lazainy”, hoy razazavavy. “Tsy mba tsy mahay araka ny lazain-dry zareo izany aho amin'ny tantara. Mbola ambony lavitra noho ny 2 (ambany kely noho ny atsasak'isa) no azoko. Diso fotsiny izao ny lazain-dry zareo. Menatra aho raha marina izay nolazain-dry zareo satria mba misy mpampianatra tantara ihany amin'ny razambeko”.
“Hitako ho hafahafa be ihany ity famelezana ahy am-bava ity saingy tsy manohintohina ahy intsony ilay izy. Manaporofo fotsiny ilay izy hoe mampatahotra ireo olona ambony mifehy ny antoko Fidesz aho. Ny fahitana an'i Zsolt Bayer tenany mihitsy mamely ahy sy ny fampiasan'ireo fampitam-baovao fialan-tsiny hosoka handotoana ahy no porofon'izany”, hoy izy nanampy.
Ilay liseana Blanka Nagy : “Pesta maharikoriko, mpanambaka, ratsy tarehy ary mora mifindra tokoa ny Fidesz. Mameno ny paosiny hitsinjovany ny fahanterany ireto andiam-pangalatra, governemantan'olombitsy ireto raha mila miaritra hirifiry ao anatin'ny fahantrana ianao rehefa retirety” Nilaza ny marina izy. Izany i Hongria.
Fitaovana fampiasan'ny fampitam-baovao mpanohana ny governemanta hongroà ny fanaratsiana sy ny fandisoam-baovao. Efa novalian'ny olo-malaza sasany avy amin'ny fanoherana tamin'ny alalan'ny fitoriana ireto sehatra ireto any amin'ny fitsarana  ny famotehan-daza fanaon'ireo. Araka ny lahatahiry azon'ny Atlatszo vao haingana, efa ampolony ny raharaha teny amin'ny fitsarana naharesy ireo seha-baovao mpanao propagandy ireto , ary efa in-109 ry zareo no nodidian'ny fitsarana hamoaka fanitsiana tamin'ny tantara navoakan-dry zareo tamin'ny taona 2018.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/16/137149/
 April 5, 2019: https://twitter.com/almodozo/status/1114178317731729409?ref_src=twsrc%5Etfw
 April 6, 2019: https://twitter.com/JulieSueGal/status/1114624991042199552?ref_src=twsrc%5Etfw
 fitoriana ireto sehatra ireto any amin'ny fitsarana: https://english.atlatszo.hu/2018/06/13/opposition-politicians-suing-dozens-of-government-aligned-propaganda-outlets-for-character-assassination/
 resy ireo seha-baovao mpanao propagandy ireto: https://english.atlatszo.hu/2019/02/07/pro-government-propaganda-outlets-lost-dozens-of-defamation-cases-in-court-last-year/